प्रधानमन्त्री ओलीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ : डा. भट्टराई
काठमाडौं, २३ फागुन । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । संसद
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २३ फागुन । प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आव्हान गरेको पत्र पढेर सुनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधिसभा
गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारवाही नगरे भद्रकालीमा अनशन बस्ने पीडित परिवारको चेतावनी (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २३ फागुन । १४ वर्ष अघि रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डघटनाको पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । पीडित परिवारले आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मलेन गरेर दोषीहरुलाई
अदालतको फैसला सम्मान गर्छौं : विष्णु पौडेल
काठमाडौं, २३ फागुन। नेकपा ओली समूहका महासचिव एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेकपा पार्टीबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गरेर जाने बताएका छन् । सर्वोच्चको फैसला आएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले
अदालतको फैसला हामी मान्छौं, पूर्णपाठ पढ्न बाँकी छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, २३ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूले सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसद् भवनमा मिडियाकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्
काठमाडौँ, २३ फागुन: महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले महिला हिंसा अन्त्यका निम्ति भएका ऐन-कानूनलाई परिमार्जन गरी कडा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । राष्ट्रिय महिला आयोगको १९औँ
२३ फागुन : भारतमा सोमबारदेखि दोस्रो चरणको बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको छ ।अधिवेशनमा आर्थिक विधेयकसँगै कर सम्बन्धी प्रस्तावहरु पनि पेस गरिने अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । सरकारले त्यस बाहेक
२३ फागुन : ब्राजिलमा कोरोनाभाइरसका कारण एकै दिनमा थप १५ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार ५५५ जनाको मृत्यु भएको
२३ फागुन : उत्तरी अफगानिस्तानको बाख्ख प्रान्तमा शनिबार राति भएको भिडन्तमा आठ प्रहरी र पाँच तालिबान लडाकूको मृत्यु भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ । प्रान्तीय प्रहरीका अदिल शाह अदिलले हातहतियारबाट
काठमाडौं, २३ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेट गरेको छ । अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालसहित बहुमत सांसदहरुले शुक्रबार दलको नेतामा प्रचण्डलाई
काठमाडौं, २४ फागुन । चन्द्रागिरी नगरपालिकास्थित श्री विष्णुदेवी माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार शिक्षा,
टीकापुर, २४ फागुन । संविधानसभा सदस्य सुकदैया चौधरीले महिलालाई आवाजले पनि बलात्कार गर्ने गरिएको बताएकी
भजनी, २४ फागुन । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका– १, गणेशपुर शिविरकी कल्पना चौधरीलाई महिला दिवसको जानकारी